देवकी र आशाले यसरी आफ्नै बुवा र आमालाई किन भकुरे र लखेटे ? हेर्नुस हर्के हल्दार (भिडियो) « Pana Khabar
देवकी र आशाले यसरी आफ्नै बुवा र आमालाई किन भकुरे र लखेटे ? हेर्नुस हर्के हल्दार (भिडियो)
समय : 11:17 pm
रेडियो अडियो’ ले श्रोताहरूका माझमा लामो समयदेखि हास्य विधामार्फत मनोरञ्जन दिइरहेको थियो । इन्टरनेटको पहुँच बढदै जाँदा रेडियोकै केही कार्यक्रम भिडियो खिचेर युटयुबमा अपलोड गरियो । त्यस्ता भिडियो लोकप्रिय हुँदै गए ।
युटयुबमा नेपालीहरूले चलाइरहेका च्यानलहरू अहिले एक हिसाबले व्यावसायिक भइसकेका छन् । आधिकारिक रूपमा गुगलमा च्यानल दर्ता भइसकेपछि भ्युअर्स (दर्शक) संख्याको आधारमा पैसा पाइन्छ ।
यी केही लोकप्रिय युटयुब च्यानल मात्र हुन् । नेपाली मनोरञ्जनको क्षेत्रमा प्रविधिको विकाससँगै अहिले आएर युटयुब च्यानलको प्रयोग बढेको छ । क्यानाडानेपाल डटनेट, ओएसनेपाल, विशाल चौतारी डटकम जस्ता दर्जनौँ युटयुब च्यानल नितान्त मनोरञ्जन लागिपरेका छन् ।
युटयुबमा ‘कपीराइट’ को नियम कडा भएकाले आम्दानीको लागि राम्रो भएको छ । यसरी हेर्ने हो भने युटयुब च्यानलको गुणस्तर वृद्धि गरी लोकप्रिय बनाउन सकेमा व्यावसायिक हिसाबले पनि सन्तोषजनक हुनेमा सबै ढुक्क छन् । नेपाली फिल्म, एल्बम, पुस्तक प्रमोसनको लागि समेत यस्तो च्यानलको प्रयोग बढेको छ । रिलिज हुनुअघि ‘ट्रेलर’ मात्र सार्वजनिक गर्ने फिल्मका निर्माता, निर्देशक र कलाकारसमेत अहिले युटयुब च्यानलमार्फत प्रचार गर्न लालायित हुन थालेका छन् ।
अब नयाँ भिडियो हेर्नका लागि टेलिभिजनै कुर्नुपर्ने चलनको अन्त्य भएको छ ।
हेर्नुस आजको हर्के हल्दार
सिंहका बथानलाई भगाएर उनीहरुको शिकार खोस्ने हिम्मतिला यी आदिवासीहरु (भिडियो)
इटालीका प्राकृतिक सुन्दरता हेर्दा आँखा कहिल्यै थाक्ने छैनन् (भिडियो)
राउटेसँग केहिदिन बिताएकी विदेशी महिला उनीहरुको दु:ख–पीडा देखेर भक्कानिएर रोइन् (भिडियो)
गरिब परिवारमा दशैंको पिडा, मह जोडीले यसरी टेलिफिल्ममा उतारेका छन् (भिडियो)
मनछुने भिडियो : जनावरहरुमा समेत यस्तो सूझबूझ र सहयोगी भावना